Raspberry Pi vs NAS Maseva: Zvese zvaunoda Kuti Uzive | Mahara emahara
Kana iwe uri kufunga nezve shandisa maseva eNAS, ipapo iwe unofanirwa kuziva kuti iwe une akati wandei sarudzo pane ako matinji. Kubva pakushandisa Raspberry Pi ine imwe nzvimbo yekuchengetera, ingave iri SD kadhi pachayo kana yekunze USB memory, yakagadzirirwa kushanda seye network network sevhisi, kushandisa gore rekuchengetera sevhisi kubva kumupi, senge elastic hosting kubva kuWebempresa, kuburikidza nehardware NAS mhinduro.
Kufanana ne servidor web, Maseva eNAS dzinogona kunyanya kubatsira mazuvano. Chero kuchengetedza data raunogona kuwana kubva chero kupi nguva chero nguva, kuti ushandise izvi zvekuchengetedza kana makopi ekuchengetedza, senge yako wega multimedia yekuchengetedza, uye zvimwe zvakawanda. Kugadzikana kwakanyanya, asi iwe unofanirwa kudzidza zvakawanda pamusoro pemhinduro dziripo kuti ugone kusarudza yakanakisa pane zvaunoda ...
1 Chii chinonzi server?
1.1 Maitiro ekuendesa maseva
1.2 Mhando dzemaseva
2 NAS maseva: zvese zvaunoda kuti uzive
2.1 Chii chandingaite neNAS?
2.2 Nzira yekusarudza akanakisa maseva eNAS?
3 Raspberry Pi: iyo Swiss Army Knife yevagadziri
3.1 Zvakanakira nekukanganisa kweiyo Raspberry Pi maringe nemaasevhisi eNAS akazvitsaurira
Chii chinonzi server?
Izvo zvakakosha kuti uzive chii chinonzi server Saka iwe unoziva kuti havazi vese vari munzvimbo hombe dhata, asi iwe unogona zvakare kuishandisa pane yako PC, pane yako Raspberry Pi, uye kunyangwe pane mbozhanhare.
Mune komputa, sevha hapana chimwe chinopfuura kombiyutazvisinei nehukuru hwayo nesimba. Iyi komputa ichave nezvakakosha zvikamu zvechero michina, pamwe nehurongwa hwekushandisa uye software inoshanda kupa sevhisi (saka izita rayo). Semuenzaniso, unogona kuve nemaseva eNAS akazvitsaurira ekuchengetedza netiweki, sevha dzewebhu kutambira mapeji, maseva echokwadi, nezvimwe.
Chero iyo sevhisi inopihwa neseva, pachave nezvimwe zvigadzirwa zvinozobatana kwazviri kuti zvibatsirwe nebasa ravanopa (server-mutengi modhi). Aya mamwe majaira anozivikanwa sevatengi uye anogona zvakare kunge ari kubva kune smartphone, Smart TV, PC, nezvimwe.
Maitiro ekuendesa maseva
Iyo mutengi-server modhi ipfungwa yakapusa, mune iyo server ichagara yakamirira mutengi kana vatengi kuti vaite chikumbiro. Asi akadaro server inogona kuitwa nenzira dzakasiyana siyana:
Kugoverwa: kazhinji zvinoreva kubata, kana webhu inomiririra, iyo inogovaniswa. Ndokunge, uko kune akati wandei mawebhusaiti anoitirwa uye ayo anowanzo kuve evaridzi vakasiyana. Ndokunge, server Hardware (RAM, CPU, kuchengetedza, uye bandwidth) yakagovaniswa.
Kubatsirwa: dzinowanzo dhura kana dzichigovanwa nevamwe. Iwe haudi yepamusoro ruzivo rwehunyanzvi, zviri nyore kutanga.
payakaipira: haina kuita zvakasiyana siyana uye kune zvimwe zvikumbiro kushomeka kwekutonga kunogona kushaikwa. Kuve uchigovaniswa, mabhenefiti anogona kunge asiri iwo akanyanya kunaka.
Zvechii? Zvinogona kuve zvakanaka kune ekutanga-kumusoro mablog kana mawebhusaiti ane isingasviki 30.000 kushanya pamwedzi. Kunyangwe kune madiki madiki emabhizimusi.
VPS (Virtual Private Server): vari kuwedzera kuve vanozivikanwa. Chaizvoizvo ikombuta "yakakamurwa" mumaseva akasiyana siyana. Ndokunge, muchina wepanyama une zviwanikwa zvakagovaniswa pakati akati wandei chaiwo michina. Izvo zvinovasiya pakati pevakagovaniswa nevakatsaurirwa. Ndokunge, mushandisi wega wega anogona kuve nehurongwa hwekushandisa pachavo, uye zviwanikwa (vCPU, vRAM, kuchengetedza, network) izvo zvavasingazofanira kugovana nemumwe munhu, vachikwanisa kubata iyo VPS sekunge yaive yakazvipira.
Kubatsirwa: ipa kugadzikana uye kusagadzikana. Iwe unenge uine midzi yekuwana kune server (kune yako zano). Unogona kuisa kana kusunungura chero software yaunoda. Panyaya yemutengo, iwo anodhura pane akazvipira.
payakaipira: manejimendi, chigamba uye chengetedzo richava rako basa. Kana matambudziko akamuka, iwe uchafanirwa kuagadzirisa, saka unoda ruzivo rwehunyanzvi rwakakura kupfuura iro rakagovaniswa. Kunyangwe iri kuita zvakawanda kupfuura iyo yakagovaniswa, inoramba ichingove nemimwe miganho ichienzaniswa neiyo yakatsaurirwa.
Zvechii? Yakakura kumakambani madiki nepakati nepakati ayo anoda kutora yavo webhusaiti kana masevhisi.
Dedicated: mavari iwe unenge uine kutonga kwezvakatipoteredza, pasina "vanogumbura vavakidzani". Izvi zvinoreva kuti iwe unenge uine muchina wako, uchikwanisa kuushandisa zvisinei iwe zvaunoda uye nekuvaka izvo zvigadzirwa zvaunoda.
Kubatsirwa: inogadziriswa zvakanyanya, kuzara kuzere uye kutonga pamusoro pevhavha, inovimbisa kuwanikwa kwezvese zviwanikwa kwauri, inovandudza zvakavanzika uye chengetedzo, kugadzikana uye kufungidzira kuita.
payakaipira: zvinodhura uye zvinoda hunyanzvi zviwanikwa kuti uzviite. Vanoda kugara vachigadziriswa.
Zvechii? Yakanakira mawebhusaiti mawebhusaiti, eCommerce saiti, uye masevhisi ayo achave aine traffic yakawanda.
Wangu wega: iwo apfuura aive ese maseva anopihwa nekambani yegore. Nekudaro, iwe zvakare unogona kuve neyako sevha. Izvi zvinogona kuve nemabhenefiti makuru, nekuti uchave muridzi weiyo Hardware, uchiwedzera zvakavanzika uye chengetedzo yedata rako. Kuti uve neyako sevha, zvinogona kuitwa, sezvandakambotaura, uchishandisa chero PC, nharembozha, uye kunyangwe Raspberry Pi. Ehezve, kana iwe uchida chimwe chinhu chine simba kupfuura icho, iwe unofanirwa kutenga maseva senge iwo anopihwa nemafemu akadai seHPE, Dell, Cisco, Lenovo, nezvimwe, kugadzira yako "data centre", chero saizi ...
Kubatsirwa: iwe uchave muridzi wevhavha, saka unenge uine kutonga kuzere. Kunyangwe pakuyera kana kutsiva zvinhu zvehardware.
payakaipira: iwe uchafanirwa kutarisira zvese zvinetswa zvingamuka, kugadzirisa, kugadzirisa, nezvimwe. Uye zvakare, izvi zvine kuwedzera kwemutengo, zvese kutenga zvakafanira Hardware uye marezinesi, pamwe nemagetsi kushandiswa kungave nemuchina, uye kubhadhara iyo IPS kana iwe uchida kukurumidza Broadband.
Zvechii? Inogona kubatsira kumasangano, makambani, uye hurumende dzinoda kudzora kwese data, kana kune vashandisi vanoda kumisikidza chimwe chinhu chakanyanya uye vasingasiye data ravo mumaoko evamwe.
Panogona kunge paine zvakasiyana mukati meizvi, kunyanya kune masevhisi uye zvivakwa zvinopihwa nevamwe vazvino vanopa, senge manejimendi masevhisi kuti iwe usafanirwe kunetseka nezve chero chinhu, chengetedzo mhinduro, nyore installers yekuisa anoshanda masisitimu kana software isina ruzivo, nezvimwe.
Muchikamu chakapfuura iwe wakakwanisa kuziva nzira dzekushandisa sevha, zvisinei, ivo vanogona zvakare kuiswa mukati zvinoenderana nerudzi rwebasa akakwereta:
Seva dzewebhu: Rudzi rwe server rwakanyanya kufarirwa. Basa rayo kubata nekuronga mapeji ewebhu kuitira kuti vatengi, nemabhurawuza ewebhu kana zvinokambaira, vagone kuzviwana kuburikidza nemitemo yakadai seHTTP / HTTPS.
Mafaira maseva: izvo zvinoshandiswa kuchengetedza data revatengi kuti vakwanise kurodha pasi kana kurodha pasi kuburikidza netiweki. Mukati memaseva aya pane mhando dzakawanda, senge sevha dzeNAS, maseva eFTP / SFTP, SMB, NFS, nezvimwe.
Email Servers: iyo masevhisi ayo aya anopa ndeyokushandisa email zvirevo kuitira kuti vatengi vakwanise kutaura, kugamuchira kana kutumira maemail. Izvi zvinoitwa kuburikidza nesoftware kuita maprotocol akadai seSMTP, IMAP, kana POP.
Dhatabhesi masevaKunyangwe ivo vachigona kuverengerwa mukati memafaira, iyi mhando inochengetedza ruzivo nenzira yekuteedzera uye kurongeka mune dhatabhesi. Mimwe software yekushandisa dhatabhesi ndeye PostgreSQL, MySQL, MariaDB, nezvimwe.
Game server: ishumiro yakatsaurirwa kupa izvo zvinodiwa kune vatengi (vatambi) kuti vakwanise kutamba muInternet multiplayer mode.
Proxy server: inoshanda seyekukurukurirana interface mumasaiti. Ivo vanoita sevamiririri uye inogona kushandiswa kusefa traffic, kudzora bandwidth, mutoro kugovana, caching, kusazivisa, nezvimwe.
DNS server: chinangwa chayo ndechekupa zita rezita rekugadzirisa basa. Ndokunge, kuti haufanire kuyeuka IP yeiseva iwe yaunoda kuwana, chimwe chinhu chinonetesa uye chisinga nzwisisike, iwe uchafanirwa chete kushandisa iyo inomiririra zita (dura uye TLD), senge www.example, es , uye sevha DNS ichatsvaga dhatabhesi yayo yeIP inoenderana neiyo domain zita kubvumira kupinda.
Simbiso maseva: vanoshandira kupa masevhisi ekuwana kune mamwe masisitimu. Ivo vanowanzo kuve ne database ine humbowo hwevatengi uye. Muenzaniso weiyi iLDAP.
vamwe: Kune vamwe, mukuwedzera, mazhinji masevhisi ekugamuchira anopa musanganiswa weakawanda eaya. Semuenzaniso, kune pekugara iyo inokupa iwe dhatabhesi, email, nezvimwe.
NAS maseva: zvese zvaunoda kuti uzive
ari NAS (Network Yakabatanidzwa Yekuchengetedza) maseva iwo network dzakabatanidzwa zvekuchengetedza zvigadzirwa. Nezve izvi iwe unogona kuve nenzira yekugamuchira dhata uye uve nayo iwe chero nguva. Rudzi rwe server runogona kushandiswa uchishandisa software pane zvakawanda zvishandiso, sePC, nharembozha, Raspberry Pi, kubhadhara gore rekuchengetedza sevhisi, uye nekutotenga yako NAS (yandino tarisa pane ino chikamu. ).
Aya maseva eNAS anozovewo neCPU yavo, RAM, kuchengetedza (SSD kana HDD), I / O system, uye yako yega yekushandisa system. Uye zvakare, mumusika unogona kuwana zvimwe zvakanangana nevashandisi vekumba, uye zvimwe zvebhizinesi nharaunda zvine hukuru hwekuita uye mashandiro.
El kushanda yeeseva aya ari nyore kunzwisisa:
System: NAS maseva ane hardware uye anoshanda system iyo ichaita mabasa ese pachena kune mutengi. Ndokunge, kana mutengi afunga kurodha pasi, kudzima, kana kurodha pasi data, ichatora nhanho dzese dzeichi, ichipa iri nyore interface kune mutengi.
Self Storage: iwe unogona kuvawana vane akasiyana marara. Mune yega yega maslots iwe unogona kuisa yepakati yekuchengetedza kuti iwedzere kugona kwayo, ingave iri HDD kana SSD. Iwo anodhiraivha akaomarara akaenzana zvakaringana neaya iwe aunoshandisa pane yako yakajairwa PC. Nekudaro, pane chaiwo akateedzana eNAS, senge iyo Western Dhijitari Tsvuku Series, kana Seagate IronWolf. Kana iwe uchida bhizinesi renji, iwe zvakare une iyo WD Ultrastar uye Seagate EXOS.
Tsvuku: Ehe, kuti iwanikwe kubva kune vatengi, inofanirwa kuve yakabatana kunetiweki. Pamwe neEthernet cabling kana neasina waya tekinoroji.
Chii chandingaite neNAS?
Kuva nemaseva eNAS anotendera iwe kuti uve neyako yekuchengetedza yega 'gore', iyo inogona kuve nemabhenefiti makuru. Pakati pe Featured mafomu Ndizvo:
Seyeti network yekuchengetedza svikiro: unogona kuishandisa kuchengeta zvese zvaunoda, semuenzaniso, chengetedza mafoto ako kubva kune yako nharembozha, ishandise sey online gallery yemafaira emultimedia, yako yeNetflix-senge yekushambadzira sevhisi inobata ako mafirimu aunofarira uye akateedzana (Plex inogona kubata izvi , Guvva,…), Nezvimwe.
Bakup: iwe unozokwanisa kugadzira backup makopi eesystem yako muNAS yako nenzira yakapusa. Nenzira iyi iwe uchagara uine backup pamunwe wako uye iwe uchavimbisa kuti yako data iri pane inozivikanwa server.
mugove: unogona kuishandisa kugovera ese mafaera neshamwari dzako uye nemhuri, kana newaunoda. Ingoisa izvo zvaunoda kugovana uye iwe unogona kuzvipa mukana kune vamwe vatengi kuitira kuti vagone kuwana kana kurodha pasi.
nemitambo: iwe unogona zvakare kuishandisa sewe webhu inomiririra kuchengetedza yako saiti ipapo. Nekudaro, ramba uchifunga kuti maseva eNAS anozogumira kune yako network bandwidth. Ndokunge, kana iwe usina mutsetse wekutsanya, uye vamwe vari kuwana iyo NAS, iwe uchaona anozivikanwa ekuita madonhwe. Iine fiber optics izvi zvakagadziridzwa zvakanyanya.
vamwe: Kune mamwe maseva eNAS anogona kushanda seFTP server, kuitisa dhatabhesi, uye mamwe anosanganisira mabasa eVPN.
Nzira yekusarudza akanakisa maseva eNAS?
Paunenge uchitenga yako seNAS sevha, iwe unofanirwa kune zvimwe hunyanzvi hunhu Kuona kuti watenga kutenga kwakanaka:
Hardware- Izvo zvakakosha kuti iwe uve neCPU ine kuita kwakanaka uye huwandu hwakatsiga hwe RAM yekugona kukuru. Kunyatsoita sevhisi sevhisi kunoenderana neizvi, kunyange zvese zvikaenderana zvishoma pane zvaunoda.
Bays / Kuchengeta: teerera kuhuwandu uye mhando yemabays (2.5 ″, 3.5 ″,…) iyo interface yatove nayo (SATA, M.2,…). Mamwe maseva eNAS anotsigira kuisa mamwe akawanda madhiraivhi akaomarara kuyera huwandu (1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB,…). Kune vamwe zvakare vane mukana wekugadzirisa RAID masisitimu e data redundancy. Uye rangarira kuti zvakakosha kusarudza NAS-yakatarwa madhiraivha akaomarara, ayo akagadziridzwa kutsigira yakakwira mitoro uye yekukwirisa:
Western Dhijitari Tsvuku Plus 8TB 3.5
Western Dhijitari Tsvuku SSD 2TB 2.5
Western Dhijitari Tsvuku Pro 4TB 3.5
Network yekubatanidza: chimwe chinhu chekufunga nezvacho kubatanidza sevha yako nemakasitoma nenzira yakanakisa.
Inoshanda system uye maapp: mugadziri wega wega anowanzo kupa maitiro ayo, uye nhevedzano yezvivakwa zveapplication uye mabasa. Kazhinji, nzira yaunofamba nayo pamusoro pemamenyu uye nesarudzo dzaunazvo pamunwe wako zvinoenderana nazvo. Zvinosiyana zvichienderana nemupi.
Mhando dzakanakisa- Mimwe mhando inokurudzirwa zvikuru yemaseva eNAS ndeyeSynology, QNAP, Western Dhijitari, uye Netgear. Mamwe mazano ekutenga ndeaya:
Western Dhijitari Yangu Cloud Kumba Ethernet yekubatanidza uye inosvika ku4TB (yekumba)
Synology DS720 + 2 Bays (yemabhizinesi madiki kana vashandisi vanodzvinyirira)
QNAP 4 Bays uye inosvika ku8 TB (yevashandi)
Raspberry Pi: iyo Swiss Army Knife yevagadziri
Mhinduro yakachipa yemaseva eNAS kana iwe usina zvido zvikuru kushandisa yako SBC kuita imwe yacho. Iyo Raspberry Pi inokutendera iwe kuve nayo yako NAS yakachipa pamba. Iwe unongoda chete:
Kuchengeta svikiro (unogona kushandisa memory kadhi pachayo kana USB chengetedzo yepakati yakabatana nePi yako. Inogona kunge iri yekunze USB hard drive kana pendrive ...
Software yekushandisa sevhisi. Iwe unogona kusarudza kubva kumamwe mapurojekiti, kunyangwe yakavhurwa sosi, seyakoCloud, NextCloud, nezvimwe.
Zvakanakira nekukanganisa kweiyo Raspberry Pi maringe nemaasevhisi eNAS akazvitsaurira
Kana iwe ukafunga kufadzwa nezvakanakira maseva eNAS, iwe unofanirwa kuongorora zvakanakira nezvisina kunaka iyo inogona kuve nekuitwa kwayo kuburikidza neRaspberry Pi:
Kudzidza panguva yekutora nzira
Zvakaoma mukumisikidza uye kugadzirisa
Inoda kuti igare yakabatana netiweki uye kune magetsi (kushandisa)
Sezvo isiri chishandiso cheNAS chakazvitsaurira, panogona kuve nematambudziko kana iwe uchida kushandisa iyo SBC kune mamwe mapurojekiti
En mhedzisoKana iwe uchida yakakosha uye yakachipa kwenguva pfupi seNAS sevhisi, iyo Raspberry Pi ichave shamwari yako yepamusoro saka haufanire kuisa mari yakawandisa. Kune rimwe divi, kune masevhisi ane hukuru hukuru hwekuchengetedza, kudzikama, scalability, uye kuita, saka zvakanakisa kutenga yako NAS server kana kuhaya gore rekuchengetedza sevhisi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Raspberry Pi vs NAS Servers: Zvese zvaunoda Kuti Uzive